Fedora 34 Beta Zvino Inowanikwa Ne Transparent BTRFS Kumanikidza | Linux Vakapindwa muropa
Fedora 34 Beta ikozvino yawanikwa neyakajeka BTRFS uye PipeWire compression kutsiva PulseAudio
Fedora 34 Beta Ikozvino yave kuwanikwa. Mukutsvaga kwayo kuve inonyanya kufarirwa GNOME-based operating system, ndinofunga iyo 34th vhezheni yeFedora ichave inonakidza kupfuura Ubuntu 21.04, nekuti yekutanga ichashandisa GNOME 40 uye yechipiri ichagara muGNOME 3.38. Canonical yakasarudza kugara neshanduro imwechete yavave vachishandisa kubva muna Gumiguru nenyaya yekuchengetedza, sezvo GNOME 40 isati yaburitswa uye GTK 4.0 iri kutora matanho ayo ekutanga, asi havazi vese vanofunga zvakafanana.
Kukwikwidzana padivi, kana paine imwe, iyo Fedora timu achangobva kuziviswa kuburitswa kweFedora 34 Beta, uye muchinyorwa ivo vanotaura dzimwe shanduko, senge kuti ivo vachashandisa yakajeka BTRFS kumanikidza kana kuti ivo vanozoshandura PulseAudio yePipeWire. Iyo yekupedzisira inofanirwa kuve shanduko diki pakutanga, asi inogona kuve dambudziko kune vasina ruzivo vashandisi vachishandisa maapps anovimba naPulseAudio. Icho chinangwa ndechekuvandudza ruzivo neFlatpak mapakeji, pakati pezvimwe zvinhu. Pazasi iwe une diki runyorwa neiyo nhau dzakatanhamara ayo asvika neFedora 34 beta.
Chii Chitsva muFedora 34 Beta
Transparent BTRFS kumanikidza. Iyo itsva vhezheni ichaimisikidza kuti iwane yakawanda disk nzvimbo. Zvakare, iko kumanikidza kunovandudza kuverenga / kunyora kuita kwemafaira akakura.
PipeWire inotsiva PulseAudio. Ivo vakasarudza iyo yekutanga nekuda kwekukosha kwayo kwakawanda.
Yakavandudza ruzivo mumamiriro ezvinhu atinopera ndangariro kana tichigadzirisa systemd-oom nekutadza.
Iyo KDE Plasma vhezheni inoshandisa Wayland nekukasira.
KDE Plasma vhezheni yeaarch64 kuvaka.
Nyowani spin i3 inova yekutanga spin kushandisa tiles hwindo maneja.
Iyi vhezheni inofanira kutove inosanganisira iyo logo nyowani. Vashandisi vanofarira kuyedza Fedora 34 Beta vanogona izvozvi download mufananidzo kubva Iyi link. Kunyangwe ichigona kuiswa seyakaberekerwa, tinokurudzira kuzviita muLive Session kana mune chaiyo muchina software, senge GNOME Mabhokisi kana Virtualbox.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Fedora 34 Beta ikozvino yawanikwa neyakajeka BTRFS uye PipeWire compression kutsiva PulseAudio